အိမ်နီးချင်း ထိုင်း🇹🇭ရေတပ်၏ ၏စွမ်းရည်မြင့် Naresuan (နရဲစွမ်) အတန်းစား frigate များအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း။
a fella | 05/11/2020 | News | No Comments
ထို နရဲစွမ်အတန်းစား frigate စစ်ရေယာဉ်2စီးကို တရုတ်🇨🇳သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် China State Shipbuilding Corporation မှ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိသင်္ဘောကျင်းတွင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Type 053 frigate တွေကိုအ‌ခြေခံ၍ အဆင့်မြင့်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နရဲစွမ်အတန်းစား frigate ‌၏ ပထမဆုံးစစ်ရေယာဉ်ဖြစ်သည့် HTMS Naresuan (FFG-421) ကို 1993 တွင်ရေချခဲ့ပြီး 15.12.1994 တွင် ထိုင်း‌ရေတပ်သို့စတင်တပ်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယစစ်ရေယာဉ်ဖြစ်သည့် HTMS Taskin (FFG-422)ကိုမူ 1994 တွင် ရေချခဲ့ပြီး 28.9.1995 တွင် ထိုင်းရေတပ်သို့တပ်တော်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
တပ်တော်ဝင်စ၌ ထိုစစ်ရေယာဉ် 2စီးစလုံးသည် ပြဿနာများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် 3.6.2011 တွင် အဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်မည်ဟုကြေညာခဲ့ပြီး အနောက်နိုင်ငံ🇪🇺ထုတ် ရေဒါစနစ်များ ၊ကွပ်ကဲရေးစနစ်များ နှင့် အခြားသော အဆင့်မြင့်စနစ်များတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ 8.8.2012 တွင်မူ အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် RIM-162 Sea Sparrow missile များအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု ပြသခဲ့ပြီး 14.1.2013 တွင် RIM-162 Sea Sparrow Missile များကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် Raytheon company နှင့်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုနောက် ထိုနရဲစွမ်အတန်းစား စစ်ရေယာဉ်(2) စီးတွင် VLS စနစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ထို VLS စနစ်တွင် RIM-162 Sea Sparrow Missile များ တပ်ဆင်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(3) အရွယ်အစား နှင့် ပုံသ‌ဏ္ဌာန်
အလျား – 120.5 မီတာ
အနံ – 13.7 မီတာ နှင့်
ရေစူး –6မီတာရှိပါတယ်။
ထိုစစ်ရေယာဉ်2စီးစလုံးသည် အများဆုံး တန်ချိန် 2900 ကျော်ရှိပါတယ်။
(5) အင်ဂျင် နှင့် မောင်းနှင်နိုင်စွမ်း
ထိုစစ်ရေယာဉ်2စီးစလုံးတွင် General Electric 🇺🇸ထုတ် LM2500 gas turbine (2)လုံး နှင့် Germany🇩🇪 ထုတ် MTU 20V 1163 TB83 diesel engine (2) လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တစ်နာရီကိုအမြန်ဆုံး 59km နှုန်းဖြင့်ခုတ်မောင်းနိုင်ပြီး တစ်နာရီကို 33km ကျော်ဖြင့်မောင်းနှင်ပါက 7408km အထိစစ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ထိုစစ်ရေယာဉ် တစ်စီးလျှင် အရာရှိ နှင့် သင်္ဘောအမှုထမ်းစုစုပေါင်း 150 ယောက်လိုက်ပါရပါတယ်။
စစ်ရေယာဉ် 2စီးဆိုတော့ အမှုထမ်းစုစုပေါင်း 300 ယောက်ပေါ့ဗျ။
1. 470km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော Sweden 🇸🇪ထုတ် Saab Sea Giraffe AMD 3D radar (1)ခု
2. 270km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော Netherland 🇳🇱ထုတ် LW08 2D search radar (1)ခု
3. 118km အထိထောက်လှမ်းနိုင်သော အမေရိကန် 🇺🇸ထုတ် AN/APS-64 radar
4. Sweden 🇸🇪ထုတ် CEROS 200 fire control radar (2) ခု
5. Kelvin Hughes 🇬🇧 companyထုတ် Sharpeye X band 1ခု နှင့် S band radar 1ခု
6. Germany 🇩🇪ထုတ် Atlas DSQS-24d sonar (1)စုံ အပြင် အခြားသောအဆင့်မြင့်စနစ်များစွာတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
1. Harris 🇺🇸ထုတ် ESM ES-3601 စနစ် (1)စုံ
2. တရုတ်🇨🇳ထုတ် Type 984-1 jammer (1)ခု
3. တရုတ်🇨🇳ထုတ် Type 981-3 deception jammer (1)ခုနှင့်
4. Denmark 🇩🇰 company ဖြစ်သည့် Terma ထုတ် Decoy Launcher (6)စုံ စသည်တို့တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
1. အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် 127mm Mark 45 Mod2Navy gun တစ်လက်တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်း အမြှောက်ကြီးဟာ -15° မှ +65° အထိအတင်အချလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်တွင် ကျည်အတောင့်ရေ
(16 မှ 20)တောင့်အထိပစ်ခတ်နိုင်ပြီး ပြောင်းထွက်ရှိန်က တစ်စက္ကန့်လျှင် 760m ရှိကာ အကွာအ‌ဝေး 24.1km ရှိပစ်မှတ်များကိုတိကျစွာပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
2. အင်္ဂလန်🇬🇧ထုတ် 30mm DS30MR စက်အမြှောက် (2)ခု တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်းစက်အမြှောက်ဟာ တစ်မိနစ်တွင် 30mmကျည်အတောင့်ရေ (100 မှ 200)တောင့်ကြားပစ်ခတ်နိုင်ပြီး 5.1km အကွာရှိပစ်မှတ်များကိုပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
3. Navy gun ကြီး၏ အနောက်တွင် ဒုံးပြွန် (8)ပေါက်ပါရှိသော VLS စနစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်း VLS စနစ်တွင် 50km အထက်ရောက်နိုင်သော အမေရိကန်🇺🇸 company ဖြစ်သည့် Raytheonထုတ် RIM-162 Sea Sparrow Missile (32) စင်းပါဝင်ပါတယ်။
4. ဒုံးပြွန် (2)ခုပါ MK-141 ဒုံးပစ်စင် (2) ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းပြွန်များတွင် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် RGM-84 Harpoon Anti-Ship missile (4) စင်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ၎င်း RGM-84 Harpoon missile တွေဟာ တစ်နာရီတွင်အမြန်ဆုံး 864km နှုန်းဖြင့် 280km ကျော်ထိရောက်နိုင်ပြီး ရန်သူစစ်ရေယာဉ်တွေကို‌ ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
5. ရေ‌ပေါ်၊ ရေအောက် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် တော်ပီဒိုပြွန်(3)ခုပါ MK-32 mod5ပစ်စင် (2) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်း ပစ်စင်တွင် အမေရိကန်🇺🇸ထုတ် MK-46 light weight torpedo များထည့်သွင်းပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း MK-46 light weight torpedo ဟာ ရေအောက် 370m အထိငုပ်သျှိုးနိုင်ပြီး တစ်နာရီတွင်အမြန်ဆုံး 74km နှုန်းဖြင့် 11km အကွာထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
1. RHIB (Rigid High speed Inflatable Boat)2စီး နှင့်
2. England 🇬🇧ထုတ် Super Lynx 300 ဘက်စုံသုံး ရေတပ် ရဟတ်ယာဉ် (1)စီး တင်ဆောင်ထားပါတယ်။ ထိုရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်ရန် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်း (1)ကွင်း နှင့် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရန် ရဟတ်ယာဉ်သိုလှောင်ရုံ (1)ရုံပါရှိပါတယ်။
ထို နရဲစွမ်စစ်ရေယာဉ် တစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ 638 million ကျော်တန်ကြေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါကတော့ ထိုင်း🇹🇭ရေတပ်၏ နရဲစွမ်အတန်းစား စစ်ရေယာဉ်များအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမှီသရွှေ့တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မူရင်းရေးသားသူနှင့် အချက်အလက်ရှာဖွေသူ – John THU and Zwal Pyae Sone Lin တို့ အားလေးစားစွာ ခရက်ဒက်ပေးပါသည်။
(အကယ်၍ အမှားပါခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့၏အတွေ့အကြုံနုနယ်ခြင်းကြောင့်သာ………..😇😇)
အိမျနီးခငျြး ထိုငျး🇹🇭ရတေပျ၏ ၏စှမျးရညျမွငျ့ Naresuan (နရဲစှမျ) အတနျးစား frigate မြားအကွောငျးတဈစတေ့ဈစောငျး။
ထို နရဲစှမျအတနျးစား frigate စဈရယောဉျ2စီးကို တရုတျ🇨🇳သင်ျဘောတညျဆောကျရေးလုပျငနျးဖွဈသညျ့ China State Shipbuilding Corporation မှ ရှနျဟိုငျးမွို့ရှိသင်ျဘောကငျြးတှငျ တညျဆောကျပေးခဲ့တာဖွဈပွီး Type 053 frigate တှကေိုအ‌ခွခေံ၍ အဆငျ့မွငျ့တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နရဲစှမျအတနျးစား frigate ‌၏ ပထမဆုံးစဈရယောဉျဖွဈသညျ့ HTMS Naresuan (FFG-421) ကို 1993 တှငျရခေခြဲ့ပွီး 15.12.1994 တှငျ ထိုငျး‌ရတေပျသို့စတငျတပျတျောဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒုတိယစဈရယောဉျဖွဈသညျ့ HTMS Taskin (FFG-422)ကိုမူ 1994 တှငျ ရခေခြဲ့ပွီး 28.9.1995 တှငျ ထိုငျးရတေပျသို့တပျတျောဝငျလာခဲ့ပါတယျ။
တပျတျောဝငျစ၌ ထိုစဈရယောဉျ 2စီးစလုံးသညျ ပွဿနာမြားစှာနှငျ့ရငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။ သို့သျော 3.6.2011 တှငျ အဆငျ့မွငျ့တငျမှုပွုလုပျမညျဟုကွညောခဲ့ပွီး အနောကျနိုငျငံ🇪🇺ထုတျ ရဒေါစနဈမြား ၊ကှပျကဲရေးစနဈမြား နှငျ့ အခွားသော အဆငျ့မွငျ့စနဈမြားတပျဆငျခဲ့ပါတယျ။ 8.8.2012 တှငျမူ အမရေိကနျ🇺🇸ထုတျ RIM-162 Sea Sparrow missile မြားအပျေါ စိတျဝငျစားမှု ပွသခဲ့ပွီး 14.1.2013 တှငျ RIM-162 Sea Sparrow Missile မြားကိုထုတျလုပျရောငျးခသြညျ့ Raytheon company နှငျ့သဘောတူလကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ထိုနောကျ ထိုနရဲစှမျအတနျးစား စဈရယောဉျ(2) စီးတှငျ VLS စနဈပါဝငျလာခဲ့ပွီး ထို VLS စနဈတှငျ RIM-162 Sea Sparrow Missile မြား တပျဆငျလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။
(3) အရှယျအစား နှငျ့ ပုံသ‌ဏ်ဌာနျ
အလြား – 120.5 မီတာ
အနံ – 13.7 မီတာ နှငျ့
ရစေူး –6မီတာရှိပါတယျ။
ထိုစဈရယောဉျ2စီးစလုံးသညျ အမြားဆုံး တနျခြိနျ 2900 ကြျောရှိပါတယျ။
(5) အငျဂငျြ နှငျ့ မောငျးနှငျနိုငျစှမျး
ထိုစဈရယောဉျ2စီးစလုံးတှငျ General Electric 🇺🇸ထုတျ LM2500 gas turbine (2)လုံး နှငျ့ Germany🇩🇪 ထုတျ MTU 20V 1163 TB83 diesel engine (2) လုံး တပျဆငျထားပါတယျ။ တဈနာရီကိုအမွနျဆုံး 59km နှုနျးဖွငျ့ခုတျမောငျးနိုငျပွီး တဈနာရီကို 33km ကြျောဖွငျ့မောငျးနှငျပါက 7408km အထိစဈဆငျနိုငျပါတယျ။
ထိုစဈရယောဉျ တဈစီးလြှငျ အရာရှိ နှငျ့ သင်ျဘောအမှုထမျးစုစုပေါငျး 150 ယောကျလိုကျပါရပါတယျ။
စဈရယောဉျ 2စီးဆိုတော့ အမှုထမျးစုစုပေါငျး 300 ယောကျပေါ့ဗြ။
1. 470km အထိထောကျလှမျးနိုငျသော Sweden 🇸🇪ထုတျ Saab Sea Giraffe AMD 3D radar (1)ခု
2. 270km အထိထောကျလှမျးနိုငျသော Netherland 🇳🇱ထုတျ LW08 2D search radar (1)ခု
3. 118km အထိထောကျလှမျးနိုငျသော အမရေိကနျ 🇺🇸ထုတျ AN/APS-64 radar
4. Sweden 🇸🇪ထုတျ CEROS 200 fire control radar (2) ခု
5. Kelvin Hughes 🇬🇧 companyထုတျ Sharpeye X band 1ခု နှငျ့ S band radar 1ခု
6. Germany 🇩🇪ထုတျ Atlas DSQS-24d sonar (1)စုံ အပွငျ အခွားသောအဆငျ့မွငျ့စနဈမြားစှာတပျဆငျထားပါတယျ။
1. Harris 🇺🇸ထုတျ ESM ES-3601 စနဈ (1)စုံ
2. တရုတျ🇨🇳ထုတျ Type 984-1 jammer (1)ခု
3. တရုတျ🇨🇳ထုတျ Type 981-3 deception jammer (1)ခုနှငျ့
4. Denmark 🇩🇰 company ဖွဈသညျ့ Terma ထုတျ Decoy Launcher (6)စုံ စသညျတို့တပျဆငျထားပါတယျ။
1. အမရေိကနျ🇺🇸ထုတျ 127mm Mark 45 Mod2Navy gun တဈလကျတပျဆငျထားပါတယျ။ ၎င်းငျး အမွှောကျကွီးဟာ -15° မှ +65° အထိအတငျအခလြုပျနိုငျပါတယျ။ တဈမိနဈတှငျ ကညျြအတောငျ့ရေ
(16 မှ 20)တောငျ့အထိပဈခတျနိုငျပွီး ပွောငျးထှကျရှိနျက တဈစက်ကနျ့လြှငျ 760m ရှိကာ အကှာအ‌ဝေး 24.1km ရှိပဈမှတျမြားကိုတိကစြှာပဈခတျနိုငျပါတယျ။
2. အင်ျဂလနျ🇬🇧ထုတျ 30mm DS30MR စကျအမွှောကျ (2)ခု တပျဆငျထားပါတယျ။ ၎င်းငျးစကျအမွှောကျဟာ တဈမိနဈတှငျ 30mmကညျြအတောငျ့ရေ (100 မှ 200)တောငျ့ကွားပဈခတျနိုငျပွီး 5.1km အကှာရှိပဈမှတျမြားကိုပဈခတျခမြှေုနျးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
3. Navy gun ကွီး၏ အနောကျတှငျ ဒုံးပွှနျ (8)ပေါကျပါရှိသော VLS စနဈတဈခုတပျဆငျထားပွီး ၎င်းငျး VLS စနဈတှငျ 50km အထကျရောကျနိုငျသော အမရေိကနျ🇺🇸 company ဖွဈသညျ့ Raytheonထုတျ RIM-162 Sea Sparrow Missile (32) စငျးပါဝငျပါတယျ။
4. ဒုံးပွှနျ (2)ခုပါ MK-141 ဒုံးပဈစငျ (2) ခုတပျဆငျထားပွီး ၎င်းငျးပွှနျမြားတှငျ အမရေိကနျ🇺🇸ထုတျ RGM-84 Harpoon Anti-Ship missile (4) စငျးတပျဆငျထားပါတယျ။ ၎င်းငျး RGM-84 Harpoon missile တှဟော တဈနာရီတှငျအမွနျဆုံး 864km နှုနျးဖွငျ့ 280km ကြျောထိရောကျနိုငျပွီး ရနျသူစဈရယောဉျတှကေို‌ ကောငျးကောငျးဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။
5. ရေ‌ပျေါ၊ ရအေောကျ တိုကျခိုကျရေးအတှကျ အမရေိကနျ🇺🇸ထုတျ တျောပီဒိုပွှနျ(3)ခုပါ MK-32 mod5ပဈစငျ (2) ခုပါဝငျပါတယျ။ ၎င်းငျး ပဈစငျတှငျ အမရေိကနျ🇺🇸ထုတျ MK-46 light weight torpedo မြားထညျ့သှငျးပဈခတျနိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျး MK-46 light weight torpedo ဟာ ရအေောကျ 370m အထိငုပျသြှိုးနိုငျပွီး တဈနာရီတှငျအမွနျဆုံး 74km နှုနျးဖွငျ့ 11km အကှာထိရောကျနိုငျပါတယျ။
1. RHIB (Rigid High speed Inflatable Boat)2စီး နှငျ့
2. England 🇬🇧ထုတျ Super Lynx 300 ဘကျစုံသုံး ရတေပျ ရဟတျယာဉျ (1)စီး တငျဆောငျထားပါတယျ။ ထိုရဟတျယာဉျဆငျးသကျရနျ ရဟတျယာဉျကှငျး (1)ကှငျး နှငျ့ လုံခွုံစှာသိမျးဆညျးထားရနျ ရဟတျယာဉျသိုလှောငျရုံ (1)ရုံပါရှိပါတယျ။
ထို နရဲစှမျစဈရယောဉျ တဈစီးကို အမရေိကနျဒျေါလာ 638 million ကြျောတနျကွေးရှိတယျလို့သိရပါတယျ။
ဒါကတော့ ထိုငျး🇹🇭ရတေပျ၏ နရဲစှမျအတနျးစား စဈရယောဉျမြားအကွောငျးကို ကြှနျတျောတို့လကျလှမျးမှီသရှတေ့ငျပွလိုကျရပါတယျ။
မူရငျးရေးသားသူနှငျ့ အခကျြအလကျရှာဖှသေူ – John THU and Zwal Pyae Sone Lin တို့ အားလေးစားစှာ ခရကျဒကျပေးပါသညျ။
(အကယျ၍ အမှားပါခဲ့ရငျလညျး ကြှနျတျောတို့၏အတှအေ့ကွုံနုနယျခွငျးကွောငျ့သာ………..😇😇)
အီရန်က ၎င်း၏နယ်စပ်အနီးသို့ ဒုံးကျည်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းအတွက် အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့်အာမေးနီးယား ၂ နိုင်ငံစလုံးကိုသတိပေး ( အားမေးနီးယားဘက်က ဝင်တိုက်က အီရန် ဂွင်ဖန်ပြီလား…..)
မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးပျံတပ်ဖွဲ့ (ရုရှား) က တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရေးယာဉ်အသစ် ၇၀ စီးကို လက်ခံရရှိ ( တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရေးယာဉ်အသစ်တွင် သာမိုနျူကလီးယားတိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးပျံစနစ်များဖြစ်သည့် Yars နှင့် Topol-M စနစ်များတပ်ဆင်ထား..)
တောင်ပေါ်စစ်ဆင်ရေး၌ တရုတ်ကို ပါကစ္စတန်ကူညီနေတာလား၊ သက်သေတွေထွက်ပေါ်နေ ( အိန္ဒိယကို ချောက်ထဲ တွန်းချချင်လို့ တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီး ပါကစ္စတန်တို့ ယုတ်မာပြီလား…..)
Covid – 19 အတွက် ကာကွယ်ဆေး မပေးလျှင် အမေရိကန် တပ်များအား နိုင်ငံတွင်းမှ မောင်းထုတ်မည်ဟု ဒူတာတေး ပြော ( ဒူတာတေးလို့ သမ္မတ တယောက်လောက်လိုတယ်…)